Australian Shepherd Blue Heeler Mix: Ihe Know Ga-ama Tupu yingzụta - Reeddịrị
Australian Shepherd Blue Heeler Mix: Ihe Know Ga-ama Tupu yingzụta
Enwere ọtụtụ ihe ị ga - eji nweta Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia bụ Blue Heeler Mix.
Ha kachasị mma maka ndị bi na ugbo ma ọ bụ na mba mana ịkwesighi ibi n'ugbo iji nwee obi ụtọ na ihe niile ụdị a ga-enye.
Ngwakọta Heeler na-eme nlekọta dị ebube maka ezinụlọ. Ha ga-echebe ụlọ gị dịka ha si echebe ebe ana-azụ anụ ụlọ.
Iguzosi ike n'ihe na ume ha amataghị oke.
Ọ bụrụ nke a Onye na-arụsi ọrụ ike na-azụ atụrụ bụ naanị ihe ị na-achọ mgbe ahụ ị na-agụ iji mụta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụdị a ...
Australian Shepherd Blue Heeler Mix Na Anya Ikiri
Australian Shepherd Blue Heeler Mix Isi
Ego Ole Ka Onye Ọzụzụ Atụrụ Ọstrelia Blue Heeler Na-efu?
Australian Shepherd Blue Heeler Mix Ọdịdị
Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia bụ Blue Heeler Mix Care Guide
Etu esi azukota Aussie na Blue Heeler Mixes
Were nkịta abụọ nwere ike ịzụ anụ ma jikọta ha ma ị ga - enweta Ọzụzụ Ọzụzụ Ọchịchị Australia bụ Blue Heeler Mix.
Ngwakọta ngwakọta a bụ nkịta dị n'èzí nwere ezigbo akara maka ịzụ anụ ụlọ. Na mpụga nke anụ ụlọ na-eche nche, ha na-eche nche nke ọma mgbe niile na-ama ihe na-adịghị mma n'ụlọ ahụ. Ha na-emekwa nkịta ọrụ dị ebube n'ihi ọgụgụ isi ha na njikere ịmụ ihe.
Ewu ewu: # 6.
Ọpụrụiche: Na-azụ anụ.
Arọ: 25-50 pound.
Ahịa: $ 200- $ 700.
Mmadụ: Na-anụ ọkụ n'obi, na-arụsi ọrụ ike ma na-amụ anya.
Nkịta Ọhịa Australia
Ahịa : $ 600- $ 1000
Afọ ndụ : 12-15 afọ
Nha : 35-50 pound
Ọrụ : Akwa
Ahịa : $ 500- $ 1000
Afọ ndụ : 10-17 afọ
Nha : 25-45 pound
Aussie Blue Heeler Ngwakọta
Ahịa : $ 200- $ 700
Afọ ndụ : 13-16 afọ
Nha : 25-50 pound
A makwaara Australian Shepherd Blue Heeler Mix dị ka Texas Heeler ma ọ bụ Nkịta Ehi Texas.
Ha bụ ngwakọta n'etiti Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia na Australian Cattle Dog na-ejikarị dị ka nkịta na-arụ ọrụ na ugbo ma ọ bụ ebe ana-azụ anụ ụlọ.
Aussie Onye Ọzụzụ Atụrụ e bred maka na-azụ atụrụ na Blue Heeler bu n'uche idobe ehi n'ahịrị.
Yabụ na ngwakọta a ị ga - enweta ezigbo nkịta na-arụ ọrụ ugbo nwere ike ịme ntakịrị ma ha abụọ!
Ọ bụghị naanị nke ahụ kama ha ga-eji anya abụọ na-elekọta ụlọ ahụ na iguzosi ike n'ihe na-adịghị akwụsị akwụsị maka ezinụlọ ha.
Ọ bụ ezie na ha na ụmụ mmadụ nwere omume enyi, ọrụ ha na-arụ na-eme ka ọ bụrụ obere oge. Ha na-akpachara anya nke ndị bịara abịa ma na-elelị ndị ezinụlọ anya mgbe ụfọdụ.
Ngwakọta Blue Heeler a dị oke ike ma na-atụ anya itinye ya n'ọrụ.
N'ihi nke a, ha nwere ike ịbụ ụdị mmezi dị elu nke mere na ọ bụghị onye nwe ya nwere ike ịnwe otu.
Magburu onwe ya n'ọrụ ugbo.
Ezigbo mma nche.
Na-eme ka onye nwe ha na-arụsi ọrụ ike.
Enwekwu ezinụlọ karịa ndị ọzọ na-arụ ọrụ.
Enwere ike ịkọ ma atụrụ ma ehi.
Na-eme ihe ike na nkịta ndị ọzọ.
Enyi na enyi na enyi.
Nwere ike ịdị anya na ezinụlọ mgbe ị na-arụ ọrụ.
Ọ bụghị ezigbo nkịta ụlọ.
N'ụtụtụ ụtụtụ gị Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia bụ Blue Heeler Mix ga-amụ anya na n'ụkwụ ha ogologo oge tupu ị teta.
Ha ga-eji obi ha niile na-eche ụlọ gị ruo mgbe ị tetara.
Ozugbo ị tetara, ha ga-agbaga n'akụkụ akwa gị ma rịọ gị ka ị si n'ihe ndina gị pụọ. Ọtụtụ mgbe ọ bụghị ụtụtụ ụtụtụ ụtụtụ ga-abụ ịkpọte gị.
Mgbe nri ụtụtụ gị pooch ga-adị njikere iji nweta ikike ịrụ ọrụ.
Mee ka ha nwee obi uto site n’iburu ha puta n’isi ututu gbadata ala uzo gi kachasi nma n’iile soro gi n’egwu.
Ozugbo nkịta gị hapụworo ike ha ka ị nwee ike ịga ọrụ na-amata na enyi gị na-eguzosi ike n'ihe ga-elekọta ụlọ ka ha na-echere gị ịlaghachi. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ apụ n'ụlọ ụbọchị niile mgbe ahụ ị ga-mkpa ndokwa a sitter na-ewepụta ha a ugboro ole na ole na-enyere jikwaa ha ike na ọkwa.
Mgbe ụbọchị ọrụ gị gafere ụbọchị Heeler gị ka malitere. Oge eruola maka nri ehihie nke ijegharị na njem na ogige.
Gị na pooch gị nwere ike iji oge ehihie na-agagharị n'akụkụ ọ bụla nke ogige ahụ, na-egwu egwuregwu egwuregwu ma na-agbago ogologo njem n'okporo ụzọ mpaghara.
Azụ oche nke ụgbọ ala ga-abụ ebe nnabata maka izu ike mgbe nkịta gwụchara ike. Mgbe ị risịrị nri abalị, Heeler gị ga - amalite ifufe maka ụbọchị ahụ.
Ọ bụrụ na nkịta gị nwere ogige dị n'èzí mgbe ahụ i nwere ike iji nke a na mgbede iji nweta njedebe nke mbugharị.
Mgbe anwụ dara, gị na nkịta gị ga-adị njikere maka ezumike abalị.
Ọ bụrụ na nwa gị bi n'ụlọ ahụ, ha ga-agbada n'akụkụ ala n'akụkụ ihe ndina gị. N'èzí Heelers ga-ahụ ebe dị mma ịnọ n'abalị.
Nkịta gị nwere ike ibili n'ụtụtụ ọtụtụ abalị naanị iji jide n'aka na ihe niile dị mma na ụlọ. N'echi ha ga-adị njikere maka ọhụụ ọhụụ.
Hụ Isiokwu Ndị Ọzọ Yiri: Blue Merle Border Collie Guide: 5 Ga-agụ Eziokwu
Iji ghọta akụkọ agbụrụ a, anyị kwesịrị ileba anya na ụdị nne na nna.
Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia sitere na Pyrenean Shepherds ndị kpọtara ha Australia site na Europe.
Ọ bụ ezie n'Australia ka ndị ọzụzụ atụrụ a nọ jikọtara ya na Collies .
E webatara ngwakọta Pyrenean na Collie na US na mbido narị afọ nke 20.
Oge a Ndị Ọzụzụ Atụrụ Australia sitere na nkịta ndị a ma nabatara ụdị ahụ na 1993.
Ya mere, aha ha (Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia) bụ ntakịrị ihe na-amaghị aha dị ka ụdị ahụ malitere n'ezie na steeti California.
Ọ bụ ezie na nkịta Cattle Australia (ma ọ bụ Blue Heeler) bụ ezigbo nkịta Ọstrelia nwere akụkọ agbụrụ mara mma nke ukwuu. Ndị nna nna ha gụnyere nkịta ehi Smithfield, Australian dingoes, Collies na ọbụna ndị Dalmatians.
E webatara ha na United States na narị afọ nke 20 ma AKC nabatara ha na 1980.
N'ime oge 1980s Texas ndị na-azụ anụ malitere ịgwakọta ụdị anụ abụọ a wee mepụta Australian Shepherd Blue Heeler Mix.
Ha ji nkịta ọrụ a nwere nzube dị ka ha nwere ike kpọrọ ihe ụdị anụmanụ dị iche iche .
Dị ahụ ka na-ewu ewu na mpaghara Texas ma ha agbanyela n'ime ala ịta ahịhịa dị ka ndị na-eche nche na-eguzosi ike n'ihe.
Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia bụ Blue Heeler Mix sitere na ebe a na-azụ nri na Texas bụ nke mere e ji nye ha aha Texas Heeler.
Naanị ọkara nke usoro nkịta a bụ n'ezie Australia. The Blue Heeler bụ nkịta Australian n'ezie ma Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia bụ n'ezie ụdị America.
Okwu heeler na-ezo aka na nkịta a na-achọ ịmịpụ ụkwụ - mgbe ụfọdụ ha ga-anwale nke a na ndị nwe ha ma ọ bụ nkịta ndị ọzọ.
Dika ha adighi adi ocha, ha enweghi ulo oru ndi otu ulo oru ma ha nwere nzukọ nnaputa nke aka ha (The Texas Cattle Dog Rescue).
Nkịta ndị a kachasị mma n'ịta ahịhịa ma ha hụkwara mmiri n'anya. Igwu bụ otu ihe omume oge ezumike ha kachasị amasị ha.
Ọrụ US na Nkwado Animal na-amata ụdị a dị ka nkịta ọrụ - a zụrụ ha dịka nkịta ndị uwe ojii.
I kwesịrị ịghọta na Australian Shepherd Blue Heeler Mix bụ nkịta na-arụ ọrụ nke mbụ.
Ha na-eji ogologo oge ma na-arụsi ọrụ ike n'ubi.
N'ime ụlọ, ụlọ ọrụ a kwesịrị ka ọpụpụ maka ike ha mmuo ozuzu ya . Enweghi uzo kwesiri ekwesi, ha gha emebi ihe ma nwekwaa ike imegide ndi ozo.
Nkịta dị ike ma chọọ imefu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ha niile n’èzí.
Ọ bụrụ na ibighị ebe ana-azụ anụ, mgbe ahụ ị nwere ike iwulite ogige ma ọ bụ mkpado mpụga maka nwa gị ma ọ bụrụ na ịnwere ohere.
Ebe ha na-arụ ọrụ, ha ga-apụta dị anya n'ebe ezinụlọ ha nọ, mana nke a bụ n'ihi na ha lekwasịrị anya na-arụ ọrụ. Ozugbo ị gwụchara ike nke pup a, ha ga-anabata ndị enyi ha.
Jikere ịnụ ọtụtụ ịgbọ ụja. N'ime nkịta a, nkịta a ga-agbọ ụja iji mee ka anụ ụlọ na ndị nwe ha nwee nsogbu. N’ụlọ a, nkịta a ga-agbọ ụja n’ebe ndị bịara abịa nọ na-eleta ndị agbata obi ya.
Ọ ga-adị mkpa ka a zụọ ha ịmata ọdịiche dị n'etiti enyi na ihe iyi egwu. Ọ ga-ewe ọtụtụ ndidi tupu nkịta gị amụta ihe na abụghị egwu. Ruo mgbe ahụ ịkwesịrị ịdị njikere maka oke mkpọtụ.
Bredị ahụ kachasị mma maka ndị nwe okenye ma ọ bụ ụlọ nwere ụmụaka toro eto na ndị nọ n'afọ iri na ụma.
Mụaka nwere ike ịnọ n'okpuru ikiri ụkwụ nke Aussie Na Blue Heeler Mix maara nke ọma.
Ntucha na ịta ụta kwesịrị ka esi atụ anya site na nwa nkịta mana ekwesịrị idozi ya ozugbo enwere ike ka ọ ghara ịbụ okwu mgbe nkịta buru ibu ma sie ike.
Nwa nkita na-akpachapụ anya ma na-eme ihere n'etiti ndị ọzọ, yabụ na ha ga-achọ ọtụtụ mmekọrịta ọhaneze site na nwata.
Atụla anya na ọtụtụ cuddles na nsutu sitere na ụdị a.
Ha ga-egosiputa ihunanya ha n'uzo nke aka ha site n'inye aka n'ulo.
Ngwakọta gị Heeler ga-eji nlezianya na-elekọta ụlọ gị ma ọ bụrụ na ihe adịghị mma mgbe ahụ ha ga-abụ ndị izizi ime ka ị mara.
The nkezi price maka a Australian Onye Ọzụzụ Atụrụ Blue Heeler Mix nwa nkita bụ $ 500. Ndị nwere ụcha ajị anụ ga-adị oke ọnụ karịa.
Ndị nkịta toro eto na-abụkarị ọnụ ala dị ala n'ihi mkpa ha dị ala.
N'ozuzu, nke a bụ ọnụ ahịa dị oke ọnụ.
Nwa nkita $ 200- $ 700
Okenye $ 200- $ 400
Nkuchi $ 150- $ 250
Bredị a na-ewu ewu na steeti Texas ha n'ihi ya ị nwere ike ịchọta onye na-azụ ya n'ebe ahụ. Na mpụga Texas, ụdị a na-esi ike ịchọta ma dị oke ọnụ.
Gbalia ihu na ha gha enyocha usoro ha tupu izuta nwa akwukwo. Ọtụtụ mgbe, ngwakọta a na-enwe mgbagwoju anya na Onye Ọzụzụ Atụrụ nke Australia Collie Mix ma ị nwere ike ịnweta ụdị dị iche na nke ị tụrụ anya ya!
Mgbe ị na-emefu ego maka nwa nkita ọhụrụ gị, ị ga-achọ itinye aka na ohere ọ ga-ewe iji debe otu. Ngwakọta Heeler dị na mpụga ha kachasị nwee ọ andụ ma ọ ga-achọ nnukwu ala iji megharịa ahụ ma ọ bụrụ na ha bi n'ime ya.
Furfọdụ ajị agba dị ka merle nwere ike ịbụ ihe dị oké ọnụ n'ihi na elu ina. Kwesịrị ịtụle ụcha ajị anụ na-ahụkarị (dị ka oji ma ọ bụ tan) ma ọ bụrụ na ị nọ na mmefu ego.
Ọzụzụ ọzụzụ ga-adị mkpa iji kpakọrịta ụdị ụdị a. Ọtụtụ klas ga-akwụ ụgwọ site na elekere agbanyeghị ị kwesịrị ị na-azụ ahịa maka ihe kacha mma maka mmefu ego gị. Fọdụ ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ nwere ike ịga ebe niile ruo $ 100 ma ọ bụ karịa.
Agbanyeghi na amatara umu a, enweghi ezi uzo.
Agbanyeghị, ịnwere ike ịtụ anya obere nkịta nwere ogologo ụkwụ na-agba ọsọ.
Imirikiti Mixe Heeler ga-enwe ntị kwụ ọtọ na anya ịmara anya - ha nwedịrị ike keta Ọzụzụ Atụrụ Australia ọchị ọchị .
Ha ga-enwe obi miri emi na oghere dị na mbara na azụ azụ.
Naanị ile anya na nkịta a ị maara na e wuru ha maka ịrụsi ọrụ ike.
Nwere ike ịtụ anya na ngwakọta a ga-eguzo n’agbata 17-20 sentimita asatọ n’ogologo na ịdị arọ 25-50.
Mụ nwoke: 18-20 sentimita asatọ na 30-50 pound.
Mụ nwanyị: 17-19 sentimita na 25-40 pound.
Site na ngwakọta a bụ otu n'ime nkịta ndị kachasị mma.
Ajị ya nwere ike ịbụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agba na ụdị ọ bụla gụnyere bulle na-acha anụnụ anụnụ na calico . Ọtụtụ mgbe ha ga-enwe ngwakọta nke ọtụtụ agba dị iche iche.
Nwa ojii na ntụ ntụ ntụ ma ọ bụ ntụpọ polka dịkarịsịrị ma ketara n'aka nne na nna ha bụ Blue Heeler.
Uwe ha nwere ike ịdị mkpụmkpụ ma ọ bụ ọkara ogologo ma nwee ụdị dị mma na silky.
N'ụzọ dị ịtụnanya na ha anaghị awụpụ dịka ị ga-atụ anya ya. Kootu ha dị ezigbo mma na ijikwa onwe ya, naanị ihe ha ga-eme bụ ịsachasị otu ugboro n’izu.
Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia bụ Blue Heeler Mix bụ a akwa mmezi nkịta nke ahụ dabara na ezinụlọ na-arụsi ọrụ ike.
Nkịta a chọrọ ka ha nọrọ ọtụtụ oge n’èzí na onye ọ bụla nwe ya kwesịrị inwe ahụmahụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-azụ anụ.
Ngwakọta Heeler bụ ihe ịma aka iwere mana ọ bara uru ma ọ bụrụ na ị nwere ike ime ka ọ rụọ ọrụ.
Ha ga-akwụ gị ụgwọ site na ikwesị ntụkwasị obi na-agaghị akwụsị akwụsị nke ị na-agaghị enwe ike ịchọta ebe ọ bụla ọzọ.
Ọchụchọ ha, ike dị elu na ịmụrụ anya bụ ihe ị kwesịrị ịtụle.
Nke a bụ arụsi ọrụ ike.
Australian Shepherd Blue Heeler Mixes ga-achọ nkeji 90 nke mmega ahụ kwa ụbọchị.
Ha na-achọ ịgba ọsọ karịa ịga ije n'ihi ya tụlee ịtụgharị otu n'ime njem ha kwa ụbọchị ka ọ bụrụ ọsọ ma ọ bụ egwuregwu.
Ọ hụrụ ọfụma ka i wee soro ha bulie ije.
Ekwesịrị ịga ije na ụdọ belụsọ ma unu abụọ nọ nso n'ụlọ - a maara nkịta a na-apụ apụ na ọ nwere ike isi ike ịkpọghachi ha.
Kama ụdị nkịta egwuregwu na egwuregwu ndị a na-ahọrọ, Ngwakọta a na-ahọrọ ịnwale ntachi obi ha ma jiri oge ha niile na-agba ọsọ ma na-awụli elu. N'ezie ma ọ bụrụ na i nwere anụ ụlọ mgbe ahụ a pooch ga-arụ ọrụ a mụrụ ya maka.
Na-arụ ọrụ kwa ụbọchị: Nkeji 90.
Ọkwa Ọrụ: 5/5.
Ọrụ Na-amasịkarị: Na-agba ọsọ.
Ọ dabara nke ọma na nkịta a nwere obere uwe silky nke na-adịghị awụfu nza.
Naanị otu ugboro ka ha ga-ehichasị otu ugboro n'izu.
Dika ha bu nkita ndi di n'èzí, aghaghi igunye nti ha otutu oge ka ha ghara idi unyi. Ntị ha dị mma ga-adị ọcha nke ukwuu ka ha na-agagharị n'okporo ụzọ ha na-eme kwa ụbọchị.
Ndị nkịta nọ n'èzí na-agbada mbọ ha ka ha na-agba ọsọ mana ị ka kwesịrị ịlele mbọ ahụ kwa izu abụọ ma ọ bụ atọ iji jide n'aka na ha anaghị adị ogologo.
Ọ bụrụ n ’ị na-eme atụmatụ iji ntu ntu, mgbe ahụ i kwesiri ime ka ha jiri ntu ntu dị ka nwa nkita.
A ga-eri nkịta dị elu dị ka Australian Shepherd Blue Heeler Mix ka ọ bụrụ nri kachasị mma maka ndụ ike ha.
Nkịta gị kwesịrị ịnwe protein 1200 nke protein, carbs na abụba dị mma kwa ụbọchị.
Nwere ike inye ha otu iko protein dị elu kibble ugboro 3 n’ụbọchị.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ị gbanwere otu iko mmanya ha kwa ụbọchị na a ịkpụ ọkụkọ ma ọ bụ ofe anụ esi. Otutu ihe oriri nke nkịta gị kwesịrị ịbịa site na ezigbo anụ na anụ. Jide n'aka na enwechaghị obere fillers ma ọ bụ ngwaahịa ndị edepụtara na ihe oriri nri nkịta gị.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ibu ha ga-eme n'etiti ọnwa 3 na 6.
Dogsmụ nkịta ga-eru 30 rue 50 obere oge tupu ụbọchị ọmụmụ ha nke abụọ na ụmụ nwanyị ga-eru n'agbata kilogram 25 na 40.
Nke a bụ ụdị ahụike dị mma dịka ị ga-atụ anya n'aka nkịta na-arụ ọrụ.
Agbanyeghị, enwere nsogbu ahụike ole na ole ị ga-elezi anya.
Ọrịa: Nke a bụ ọnọdụ anya ebe ntutu dị iche iche na-eto n'ime nku anya nke nkịta. Ajị ndị a nwere ike ịkpata mgbakasị anya na ọbụna bute ọnya na cornea. Enwere ike ịhụ ntutu gị ma ọ bụrụ na ị lelee anya nke ọma mana ị nwere ike ịhụ ọbara ọbara na anya mmiri ọzọ. Nwa gị ga-achọ ịwa ahụ iji dozie nke a n'ọnọdụ dị nro tụlee na ude mmanụ nwere ike iji belata iwe ahụ.
Ntị: O di nwute na nkịta na-acha odo odo nwere mmetụta nke ntị chiri nke congenital. Nkịta nwere ike ntị chiri site na mgbe a mụrụ ya ma ọ bụ ịzụlite ntị ntị ha tolitere. Ọnụnọ ntị na-eweta nsogbu ọhụrụ maka Heeler Mix mana ọ dabara na ọ dịkwa ike ijikwa. Nkịta ntị chiri ga-eme mgbanwe site n’ịmụta iji mee ka uche ha dị nkọ ka ha nwee ike ịrụ ọrụ ha n’agbanyeghi oke nkwarụ ha. Ntịchi abụghị ihe a na-ahụkarị na mpụga nke ụdị agba agba agba agba.
Ogologo oge ole ka onye ọzụzụ atụrụ Ọstrelia Blue Heeler Na-ebi Ndụ?
Nwere ike ịtụ anya na Australian Shepherd Blue Heeler Mix ga-adịru afọ 13 ruo 16.
Zụzi Blue Heeler Mix site na nwa nkita dị ezigbo mkpa iji nyere aka wepu ahịhịa na ịkwa ụta ọ bụla.
Kwesịrị ịmalite ịkwadebe gị ọzụzụ ọzụzụ nkịta tupu ị kpọlata ha n'ụlọ!
A maara ndị na-eme ikiri ụkwụ maka ịnwale ókè ka nkịta gị wee ghọta na ị gaghị ada mbà.
Ọzụzụ agwụbeghị ruo mgbe ị kwuru na ọ bụ na ikwughachi ihe bụ isi.
N'oge nkuzi ọzụzụ siri ike ekwula iwe gị ma ọ bụ nwa gị ga-anakwere ya. Nọgide na-enwe mmetụta n’agbanyeghi otu o siri sie ike na nkịta gị ga-ekele gị. E kwesịrị ime ka mmekọrịta mmadụ na gị nọrọ n'akụkụ kama ịnọ n'ụlọ. Nkịta gị nwere ike na-echegbu onwe ya na ya na ndị ị na-amaghị ga-emekọrịta ihe belụsọ ma ị nọ ebe ahụ.
Egwu ndị mmadụ abụghị ihe a na-ahụkarị na ụdị a n'ihi ya mmekọrịta oge mbụ dị mkpa.
Ọ ga-abụ na ha agaghị amụta ịhụ ndị bịara abịa n'anya kama ha nwere ike ịmụta iso ha na-emekọrịta ihe.
Nke a abụghị nkịta nke nwere ike igwu egwu nke aka ya ma ọ bụ hapụ naanị ya ịdọ ụdọ. Ha na-atụ anya na a ga-enye ha nsogbu kwa ụbọchị iji gosipụta ntachi obi na ụbụrụ ha.
Nye ha ọhụụ ọhụụ kwa ụbọchị ma ha agaghị agwụ ike.
Were nkịta gị na njem njem njem, ụzọ ụkwụ na ihe omume ndị ọzọ kwa ụbọchị.
I nwekwara ike igwu egwuregwu dika mkpado. Tag bụ egwuregwu na-atọ ụtọ ị nwere ike igwu nkịta ọ bụla na-azụ anụ . Ọ na-eme ka ebumpụta ụwa nke anụ ụlọ ha dị mma ma na-atọ ụtọ.
Mgbe ị na-egwu egwu, ịnwere ike iji ohere ịme iwu dị ka ịnọdụ ala, nọrọ na ikiri ụkwụ. Nkịta gị ga-ekpori ndụ ma mụta ihe n'otu oge.
Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia bụ Blue Heeler Mix bụ otu n'ime nkịta ndị ọrụ ugbo nwere mmasị na ya .
Onye ọ bụla nke na-achọ onye ahụike ga-ahụ ike na-enweghị njedebe nke nkịta a.
Onye na-azụ atụrụ a na-enye aka na-achọ mgbe niile ka ọ nọrọ n'ọrụ ma na-adị njikere mgbe niile maka ọhụụ ọhụrụ. Mmụọ mmụọ ha ga-eme ka gị na ezinụlọ gị nwee obi ụtọ ịchọpụta.
Ngwakọta Blue Heeler ga-abụ otu n'ime ezigbo ndị enyi ị ga-enwe.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta ụlọ dị mma maka ha, ha ga-ahụ gị n'anya ruo mgbe ebighi ebi.
Biko mee ka anyị mata ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a ...
Kedu ihe bụ Miniature Husky na gịnị kpatara mmadụ niile ji chọọ otu?
Nkịta nwere ike iri oporo, ọdụ shrimp na Shell Shell?
pitbull na chihuahua mix ụdị
ogologo ntutu nwere uhie uhie daach dachshund
ụmụ bebi ochie atụrụ na -ewu ewu
ọkara nkịta ọkara nkịta onye ọzụzụ atụrụ German
ngwakọta nke pitbull terrier labrador retriever mix